Adeeg - Raymin Display Products Co., Ltd.
Fikrad Iyo Naqshad
Waxaa jira dhowr ilbiriqsi oo keliya oo macmiilku ku siiyo. Waxay si sax ah u noqon karaan macaamiishaada bartilmaameedka ah haddii aad u soo jiidan karto iyaga inay soo qaadaan alaabtaada. Meel wanaagsan oo lagu iibiyo Kaarboorka ama Baakadaha Warqadaha ayaa taas kuu samayn kara. Naqshadeeyayaashayadu way fahmeen sida loo sameeyo oo way kula shaqeyn doonaan si loo habeeyo xalka wanaagsan, iyada oo ujeedadu tahay inay kaa caawiso inaad abuurto dadaallo suuq-geyn tafaariiqeed oo guuleysta oo kor u qaadaya iibinta alaabtaada.
Ma jiro xalka caadiga ah ee barta wax iibsiga. Taasi waa sida xalalka bandhigeennu u shaqeeyaan - si looga dhigo mid u gaar ah astaantaada iyo wax soo saarkaaga. Waxaan raacnaa baahiyahaaga gaarka ah waxaanan iska kaashannaa sidii aan fikradaheena hal abuurka ah ugu gudbin lahayn mashruuca. Waxaan kaliya ognahay inaad layaabi doonto natiijooyinka. Marka su’aalaha ayaa ah, sida loo helo xalka ugu fiican ee adiga kugu habboon?
Ma leedahay naqshad-daabicid?
Cabsi badan, waxaan ku heli karnaa qaabeyntaada dhabta ah farshaxankaaga. Tijaabada tijaabada ah ayaa laguu soo bandhigi doonaa lagana yaabee inaad soo jeedinteena xirfadeed.
Ma la yaabban tahay saameynta ugu dambeysa?
Ha welwelin. Waxaan leenahay naqshadeeye 3D sidoo kale wuxuu kaa caawin doonaa inaad sameysid saldhig 3D ah oo ku saabsan fikraddaada ama sawir gacmeedka iwm.
Mise wax fikrad ah malahan gabi ahaanba?
Muhiim maaha, kaliya noo soo dir faahfaahinta alaabtaada, noo sheeg tirada FSDU u baahan tahay inaad soo dhigto alaabada. Waxaan kuu habeyn doonaa xalka adigatalooyinkayaga xirfadeed. Sanado badan oo khibrad ah abuurista POP iyo xirmooyinka tafaariiqda, kooxdeena qaabeynta qaab dhismeedka waxay horey u adeegsadeen naqshadaha warshadaha kala duwan. Kooxda Naqshadeynta Muuqaalka Raymin waxay hadda siineysaa xalal xirfadeed shirkadaha caalamiga ah iyo kuwa Shiinaha ee caanka ah.
Haysashada qaab-dhismeedka qaab gaar ah uma eka ujeeddada keliya, waxaan sidoo kale dooneynaa inaan ka dhigno mid qiimo ku fadhida. Iyada oo khibrad u leh qaabeynta dhammaan noocyada bandhigyada, Raymin Display waxay u heellan tahay inay adeegsato habka ugu dhaqaale ee lagu dhiso bandhigga. Waxaan keydineynaa qiimaha macmiilkayaga sidoo kale waxaan badbaadineynaa deegaanka anaga oo isticmaaleyna alaab ceeriin ah waxaanan ku badalnaa qaybaha balaastigga ah waxyaabo dib loo cusbooneysiin karo.
Kahor intaadan usameyn sameynta muunad, saamiga 1: 1 3D bixiyaha ayaa lasiin doonaa macmiilka si uu u yeesho muuqaal muuqaal ah shaashadda. Aad ayey ugu fududdahay macaamiisha dusha sare inay si dhakhso leh u oggolaadaan shaybaarada.
Bixinta Muunad Degdeg ah
Shaybaarka cad ayaa lagu dhammayn karaa 1-2 maalmood oo shaqo gudahood halka tijaabada midabku ay qaadan karto 2-3 maalmood oo shaqo ah.
Sambalka lacag la'aanta ah
Muunadeena badiyaa waa u bilaash macmiilkeena hadii ay jeclaan lahaayeen inay dalab noosoo gudbiyaan.
Muuqaalka Raymin wuxuu leeyahay warshad maamusha dhamaan howlaha guriga, na hubiya heerarka tayada ugu sareeya iyo waxtarka si aan kuugu soo bandhigno bandhigyadaada iyo baakadahaaga sida ugu dhakhsaha badan. Waxaan leenahay mashiinka daabacaadda khafiifka ah, mashiinka duudduuban ee baaxadda weyn, mashiinka dhinta-goynta otomaatiga, ECT. Ku saleysan kuwan, waxaan awoodnaa inaan si adag u xakameyno kharashyada isla markaana aan u soo saarno bandhigyo iyo baakado ka dhaqso badan tartamayaasha kale.
Tayada iyo Adeegga iibka kadib waa Waxyaabaha Ugu Muhiimsan
Waxaan marwalba u hoggaansameynaa "Adeegga Tayada iyo Ka-iibinta Kadib Waa Waxyaabaha Ugu Muhiimsan" aaminaadda ganacsiga. Marka la raaco nidaamka maaraynta tayada ee ISO 9001, waxaan dhisnay koox adag oo QC ah, ku dabaqo maareynta tayada wax soo saarka iyo habka shaqada labadaba.
1 × KBA Rapida 162 5C Offset Press, Xajmiga Xaashida 1220 × 1620
1 × KBA Rapida 145 5C Offset Press, Xajmiga Xaashida 1060 × 1450
2 × Komori Lithrone S40 5C Offset Press, Xajmiga Xaashida 720 × 1020
1, Xaashida Xaashida Waraaqda, Xaashida Xaashida 1700 (W)
1, warqad magaabay, Xaashida Xajmiga 1680 × 1680
1, Mashiinka Mashiinka Dareemiya, Xajmiga Xaashida 1220 × 1620
1, Mashiinka Mashiinka Laminka, Xajmiga Xaashida 720 × 1020
1, Machine jiingado jiingado, Xajmiga Xaashida 1650 × 1650
2, Mashiinka sii kordhaya Jiingado, Xajmiga Xaashida 720 × 1020
Xarunta Dijital ah
2, Epson 7910 Color Proof Digital Press, Xajmiga Xaashida ilaa 610
1, Rzcrt-2516-Ⅱ Qalabaynta Dijital
1, Rzcrt-1813E magaabay Digital
1 × Imtixaanka Gudiga Ect
1 × kartoonno, Mashiinka Meterka Mashiinka Jajabay ee Kartoonada
1 Machine Mashiinka Imtixaanka Xoqista Xaraashka Ink
Goynta-Goynta, Laabashada & Cirridka
1, Mashiinka Mashiinka Dhinta, Xajmiga Xaashida 1220 × 1620
2 × Mashiinka Mashiinka Dhimashada, Xajmiga Xaashida 720 × 1020
3, Semi-Auto Mashiinka Mashiinka-Goynta, Xaashida Xaashida 1200 × 1620
1, Aaladda Gawaarida Gawaarida iyo Mashiinka Mashiinka, Xajmiga Xaashida 1100 × 1100
1 × Auto Box Folding and Mluing Machine, Xajmiga Xaashida 780 × 780
Si loo kaydiyo kharashyada wax lagu duubo, macaamiisha qaarkood waxay doorbidaan inay alaabooyinkooda si sax ah ugu xareeyaan Muuqaalka Kaartarada Tani badiyaa way dhacdaa haddii ay jiraan noocyo badan oo badeecooyin ah oo lagu qasinayo FSDU.
Adeegyadayada Golaha oo ay ka mid yihiin:
· Kaydinta bandhigyada iyo alaabada
· Buuxinta bandhigyada shaqsiyeed ee alaabada
· Ku meelaynta santuuqyada yaryar
· Xamuul iyo xirxirida santuuqa caadiga ah
· Tijaabooyinka gaadiidka
· Kaydinta sariirtaha diyaarka ah
Macaamiisha qaar waxay sidoo kale u baahan yihiin inay ku xareeyaan 1 ama dhowr nooc oo bandhig ah hal kartoon oo ay ku jiraan warqad tilmaam ah oo ku saabsan isku imaatinka.
Warshadeenu waxay kuxirantahay Foshan, oo kutaala agagaarka dekedda Shenzhen. Aad ayey noogu habboon tahay inaanu dekedda hore dejino bandhigyada POS dhammaantood. Waxaan bixinnaa shixnad badeed, shixnad hawada ah iyo gaarsiin deg deg ah, sida waafaqsan shuruudahaaga.
Cinwaanka: Dabaqa 6aad, No. 6348, Bao'an Ave., Fuhai Street, Degmada Bao'an, Shenzhen, Guangdong, CN 518103